Fametrahana ho an'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny 2017 | Martech Zone
Na dia efa manomboka aza ny vanim-potoanan'ny krismasy, miaraka amina fandaharam-potoanan'ny mpiasa ary ny pies dia manao izany isaky ny birao, ity koa no fotoana hieritreretana mialoha ny taona 2017 mba hahazoana antoka fa amin'ny 12 volana, hankalaza ny fahombiazana hitany. Na dia mety mifoka rivotra aza ireo CMO manerana ny firenena taorian'ny fanamby 2016, tsy izao no fotoana tokony hianina.
Tao anatin'ny herintaona dia nahita olona goavam-be teknolojia niovaova ny fanatitr'izy ireo, toa ny UberEats, Amazon fivarotam-boky ary Apple mandavaka ny jack headphone, izay nanery ny orinasa hieritreritra ny fomba ahafahany mivoatra koa. Ny fametrahana ny lisitr'ireo lohahevitra noresahana indrindra dia ny Reality Virtual, automatique ary ny etos fanombohana ny fanamby ny fanao.
Taorian'ireto fanapahan-kevitry ny orinasa ambony ireto sy ny fironana vaovao, noterena hanontany ny karazana fiovana tokony eritreretin'izy ireo koa ireo mpitarika orinasa. Fotoana izao handinihan'ny mpivarotra ny dingana tokony horaisin'izy ireo hiantohana ny traikefa mifantoka amin'ny mpanjifa amin'ny taona 2017.
Ny mpanjifa no lakileny
Raha naneho zavatra taminay tamin'ity taona ity ny fanapahan-kevitry ny orinasa noraisin'ny marika lehibe dia ny mpanjifa no manan-danja. Voalohany ary ilaina indrindra, ny mpivarotra dia tsy maintsy manana an'ity fisainana ity isaky ny fampiasam-bola amin'ny taona 2017. Mila mieritreritra izay atiny tadiavin'ny mpanjifany izy ireo, inona no hataon'izy ireo indrindra, ary angamba ny tena lehibe indrindra, ny fomba tian'izy ireo handraisana an'ity atiny ity. Amin'ny fijerena ny fomba ahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpanjifany tsaratsara kokoa, ny orinasa dia mahazo tombony betsaka.
Ataovy laharam-pahamehana ny finday
Ny fomba tokana ahafahana mifandray amin'ny mpanjifa ankehitriny dia ny fanatonana azy ireo amin'ny alàlan'ny fomba fampiasan'izy ireo matetika. Miaraka amin'ny 80% an'ny olon-dehibe UK manana a smartphone, tsy mahagaga raha ho an'ny ankamaroan'ny orinasa dia fitaovana lehibe hahatratrarana ny mpampiasa farany anao izany. Na izany aza, taitra izahay nahita ny vao tsy ela izay Mpanakorontana nomerika mitatitra fa ny 36% amin'ireo orinasa dia mbola tsy manana tranokala finday. Izao no fotoana tokony hiantohan'ny mpivarotra fa tsy diso anjara izy ireo amin'ny tsy fanoloran-tsafidy safidy finday, raha ireo izay efa manana tranokala finday kosa dia tokony hanamarina raha toa ny mpampiasa arak'izay azo atao.
Ny tranokala finday dia tokony horaisina amin'ny lanjany mitovy amin'ny tranokala birao. Tokony ho mora ny fitetezana azy, miaraka amin'ireo endri-javatra rehetra hita eo amin'ny birao, ary tsy tokony ho be korontana na sarotra hanodinkodina izany. Izany dia mitaky menus, sary masina ary bara azo ahodina izay mahafinaritra ny maso. Ireo singa ireo dia mila ampifanarahana amin'ny lamina lojika sy ny teny fohifohy mba hitokona ilay tranokala finday, nefa azo tsaboina ihany koa.
Manatsara ny fampiasam-bola
Ny taona 2016 dia nanipy ny teknolojia vaovao sy ny fironana izay hodinihin'ireo orinasa. Na izany aza, miroso amin'ny taona vaovao dia tokony hitandrina ny mpivarotra mba tsy hampiasa vola amin'ny haitao ho an'ny teknolojia. Ho an'ireo 36% izay nilaza tao amin'ny anay Mpanakorontana nomerika tatitra izay inoany fa ny orinasany dia mila mampiasa vola bebe kokoa amin'ny dizitaly vao fanavaozana, zava-dehibe ny hanaovana ireo famatsiam-bola ireo aorian'ny fikarohana lalina rehefa manana ny fahaiza-manao fampitomboana ny fampanjariam-bola ny orinasa ary raha tsy efa voafaritra ny tranga tena fampiasana.
Sintomy ny tatitry ny Digital Disruptor
Raha tsy misy an'io toe-tsaina io dia mety handany vola amin'ny zavatra tsy ananany fahaizana mitazona azy ireo ny orinasa. Ohatra, 53% ho an'ny mpivarotra ekeo fa sahirana amin'ny fampiasana rindrambaiko automatique marketing mihoatra ny fampiasam-bola voalohany. Ankoatr'izay, ny fangatahana avy amin'ny mpanjifa dia tokony ho eo. Raha tsy liana amin'ny fakana teknolojia vaovao hifandraisany amin'ny marikao izy ireo, dia ho fampiasam-bola very maina izany.
Mba hidirana amin'ny 2017 miaraka amin'ny paikady nomerika matanjaka, ny mpivarotra dia mila mandinika ireo teboka rehetra ireo. Ny fitazonana ny mpanjifa ho fon'ny fanapahan-kevitra rehetra, na eo aza ny fanombanana tsy tapaka ny sanda izay mety hoentin'ny fironana sy ny teknolojia vaovao, dia midika fa ny orinasa dia afaka manorina fifandraisana matanjaka kokoa amin'ny mpampiasa faratampony ary manamafy ny tsy fivadihan'ny marika.
Tags: 20162017CustomerFivarotana finday sy tabletteuk
Mpiara-miasa amin'ny orinasa fanovana nomerika, Squiz. Squiz dia iray amin'ireo mpamatsy vahaolana lehibe indrindra miorina amin'ny tranonkala. Izy io dia manontany, manangana ary mitantana tranokala mahasarika sy rindranasa an-tserasera amin'ny alàlan'ny vokatra open source Web Experience Management, ny Squiz Suite.
Dec 20, 2016 ao amin'ny 9: PM PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Misaotra ny fizarana.